Igwe na-esikwa igwe na-akwa akpa, ihu igwe nkpuchi | Agwaetiti
Ewepụta nwere ọgụgụ isi igwe eji akpaka igwe na-emepụta akwa.
Akpaaka igwe akụrụngwa
Igweoduakwa maka akpaka bọlbụ
Igwe na-akpaghị aka
A na-etinye akara ngosi dị egwu
A na-etinye ọtụtụ wascbasting Wistbery Station QK-346
Waistdrk Sonisttch igwe QK-346-2
Igwe na-agbanwe agbanwe
Somentatmụaka na-emekọ mmiri Hemmmer igwe
Akpaka larịị nke akpaka, aka uwe na ala
DININTNINT BANDIDRIRIRIRIRIROTRAS QK-343
Akpaka ụzọ na-agbachichi igwe QK-343-3
Ngwongwo aka akpaka na-eme ihe
Ngwaọrụ akpaka QK-362
Igwe ọrụ ọtụtụ ọrụ
Akpaaka cuff na-atụgharị igwe QK-366
Ngwaọrụ akpaaka akpaaka
Overlock & Sentaltich jikọtara igwe QK-380
Akpaka abụọ ubu n'akụkụ seam Hemmer
Igwe na-adọba akwa maka akwa akwa
Mgbe ọtụtụ afọ na-agagharị na nyocha na usoro mmepụta ihe na akụrụngwa nke ịkụnye uwe ndị uwe ojii, anyị amalitela igwe dị iche iche&igwe eji eme ihe eji akwa igwe nke ndi ahia choro.
Qk300h connestert Memmer
1.Tatomatic nha mara mma, na-akọwa ya na ịchịkwa. Payutomatic mmalite, trim eri, na-emejupụta ihe na-eme mkpọtụ na tojupụtara. 3. Ngwa nchọpụta seam nwere ọnọdụ ịchọpụta ọnọdụ mmalite&kwụsịlata ma zere ịchọpụta ihe na-ezighi ezi maka agba agba. 4.Tị usoro nchịkwa nwere ike ịchọpụta akụkụ abụọ ahụ na ezigbo ọnụ ntụ ntụ. Ngwaọrụ 5.CCorth na-ahụ otu atụmatụ ahụ dị mma na-ahazi n'èzí na n'ime. 6. E meghee anya na-eme ya ọnụ.
Ọ bụ ngwa na-akpaghị aka na-akpaka, mpịakọta akpaka, akpaka akwa, na-ata ahụhụ, na-anata mkpu na mkpofu akpaka. Anyị nwere ike ijikwa ya site na mmemme, ọ nwere ike rụọ ọrụ ngwa ngwa, ma nwee uru dị elu nke arụmọrụ dị elu na ịchekwa ume. Ngwa: uwe polo nke, akwa akwa mkpuchi.1, usoro nduzi na mpịakọta mpịakọta na-ahụ maka ịdị elu dị iche iche.2, eriri dị na akpaghị aka mgbe ị na-eme ka ọ dị mma maka ibe ya.3. A na-etinye akụkụ ahụ emechara.4. A na-akwụsị nkwụghachi ozugbo.5. A na-agbaji ya na-agbanwe agbanwe.6. Ngwaọrụ na-emebi akpaka akpaka.
Akpaka lapel olu akwa Machine Model QK-350
Akpaaka lapel olu akwa igwe Model QK-350
Akpaka ụzọ na-eji akwa akwa igwe mpịakọta ihe nlereanya QK-343-3
Akpaka ụzọ na-eji akwa akwa igwe mpịakọta ihe nlereanya QK-343-3Atụmatụ: Ngwaọrụ a na-adọka ngwa ahịa na-akpaghị aka nke a na-eji a dọrọ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ. Ebere ya na ngwaọrụ mgbapụta akpaka, ihu akpaka ikuku na-agagharị na usoro nduzi.Ngwa: Kwesịrị ekwesị maka uwe nchara dị larịị.
Igwe ihe ndebiri QK-345.Ndị ahịa zụtara ngwaahịa a niile na-adọrọ mmasị site na glaze. Ha kwuru na glaze ahụ na-eme ka ọ dị ka tebụl dị elu.
Akpaaka cuff na-atụgharị igwe igwe ihe nlereanya QK-366
Qk-366 akpaka akpaaka curchicting.Atụmatụ: ọ nwere ike izipụ akwa, ịkwanye, na-achọta ngwa ngwa, na-akpaghị aka nke ụkọ ihe, oghere na-emegharị ya, ịkwanye na-atụgharị nke ogologo na obosara. Ngwa a nwere ike imejupụta mmiri ọgịrịga, cuff tụgharịrị na ịkpụ ya n'otu oge, nha na-adọkpụ ọka arụmọrụ dị elu.Ngwa: ụdị ọgịrịga ịgịrị ọnụ.
Ibelata ihe eji eme ihe eji eme ihe
Kachasị mma akpaaka cuff na-arụ ọrụ ntọzi QK-360 Factory. na-enye ngwaahịa dị ọnụ ahịa karịa na zuru oke na nke zuru oke.Atụmatụ: ọkwá akpaaka maka ịkwaghe oghere oghere na ọgịrịga cuff. Ngwaọrụ a nwere ngwaọrụ rollersl iji mee ka akwa ahụ sie ike n'oge ọrụ. Usoro njikwa elektrọnik na-agbanwe nha. Nchịkwa nke prenematic na eletrik eletrik, sistemụ ejikọtara ya na ngwaọrụ ịnweta akpaka. Ngwa Mgbasawanye akpaka, akpaka akpaaka na-akpachapụ anya, wdg.Ngwa: ụdị dị iche iche a na-ekechi, udu nmiri na udu mmiri na-eyi.
Na-emebi emebi na-agbanwe agbanwe ma igwe QK-375.Atụmatụ:(1) ngwaọrụ na-agbasawanye maka njikwa nha.(2) Ngwakọta na-eduzi ngwaọrụ zuru oke zuru oke.(3) Eriri a na-agbaji na-akpaghị aka mgbe ị na-ehi ụra.(4) ngwaọrụ mkpofu akpaka akpaka.Agụ: Jersey, Lycra tiswear wasband.
Dongguan ngwa ngwa ngwa akpaka., LTD, guzobere na 2014.
Bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgbara ọhụrụ na mmepe na mmepụta akpaka ngwa agha (igwe ịkwa akwa maka akwa iji akwa). Nchọpụta na ịmepụta ihe bụ ihe mmepe mmepe mmepe nke anyị, na ngwa ngwa na-etinye ihe karịrị 10% ntụgharị kwa afọ iji zụlite ma gbasaa ndị ọkachamara na arụmọrụ nke ọma&d na ndị otu mmepụta.
Mgbe ọtụtụ afọ na-agagharị na nyocha na usoro mmepụta ihe (igwe ịkwa akwa akwa), anyị amalitela igwe dị iche iche na-akwalite igwe ndị ahịa chọrọ.